Bahreïn: tokony hisaron-doha ve ny tovovavy? · Global Voices teny Malagasy
Bahreïn: tokony hisaron-doha ve ny tovovavy?
Voadika ny 08 Avrily 2008 20:27 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy ela akory izay dia nijery fanehoan-kevitra mahakasika ny olàn’ny mpandeha an-tongotra. eto Bahrein, ny fomba fisainana tsy mandroso anànan’ny tanora Bahraini, ny tsindry (fanerena) mianjady amin’ireo tovovavy momba ny fitondràna saron-doha (voaly) – sy ny ilàna ny fifandraisana bebe kokoa amin’ny Amerikanina ireo mpitoraka blaogy avy eto Bahrein.
Mandehàna – mijanona
Atombontsika miaraka amin’i Ammaro izay malahelo ireo mpizahatany vao tonga eto Bahrain noho ny fisian’ny fifaninànana manamory fiarakodia (Grand Prix de Formule 1) ary mieritreritra ny ho afaka mivezivezy malàlaka:
Ny fahitàna ny araben’i Bahrain feno vahiny tonga eto mba hijery ny hazakàzaka Formule 1, dia manome endrika manokana ny tanàna. Nitondra fiara nihodidina an’i Manama aho ary nahita karàzana olona avy amin’ny firenena maro samihafa mandeha eny antsisin-dàlana ; Amerikanina, Eropeana, Sinoa, sy ny sisa. Mandeha an-tongotra izy ireo satria, (mifanipaka amin’ny fomban'ny Bahraini), raisin’izy ireo ho fomba iray mahomby hitsidihàna ny faritra rehetra izany. Raha efa niaina teto Bahrain naharitraritra ianao fa tsy hoe andro vitsy monja, dia hahatàkatra fa fara-fidy ny fandehànana an-tongotra rehefa misy haleha. Voalohany indrindra, tsy dia misy loatra làlana natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra, manjary toy ny manao fanazàran-tena amin’ny hoe ‘ataovy izay tsy hahavoadonan’ny fiara anao rehefa mandeha amin’ny sisin-dàlana’. Faharoa, ireo toerana tian’ny maro hotsidihana dia vitsy sy lavitra ary saro-dàlana ka mahatonga ny fiara ho tsy maintsy ilaina. Ankoatra izay, mahita koa aho, ireo mpizahatany mitety etsy sy eroa, mandeha eny amoron-dalana eny, amina làlana zàra raha vita rarivato, mikitoantoana, akentron’ny hakiviana. Tsy manome tsiny azy ireo aho raha kivy izy; ny nataonay ihany mantsy no nahatonga ny tanàna ho manahirana ny mpandeha an-tongotra toy izao. Tena tsy ampy mihitsy ny fitateram-bahoaka, noho izany tsy maintsy mànana fiara azy manokana ny olona. Tsy maintsy mànana fiara azy manokana ny olona, ary dia betsaka ny làlana namboarina mba hahafahàn’ny fiara mivezivezy, adino tanàtin’izany rehetra izany ny mpandeha an-tongotra. Mety io rehefa ny olona rehetra ao anatin’ilay firenena no tsy zatra intsony mandeha an-tongotra. Tsy mety kosa indray raha toa ianao mànana mpitsidika an’arivony maniry mba hitety tanàna anaty fitoniana . … Noho izany tadidio, ry mpitsidika hajàina eto Bahrain; manan-jàvatra tsy tambo isaina azo atolotra anareo ny firenenay, zavatra betsaka azo jerena, toerana maro azo aleha ; fa mila mivonona fotsiny ianareo hamily fiara!
Tsy misy ho antenaina?
Tsy ny rehetra no ho afaka hanàraka ny toro-hevitr’i Ammaro, noho izy ireo tsy mànana fiara; ; vao haingana i Mohammed AlMaskati nandray tanora Bahraini teny an-dàlana ary dia sahiran-tsaina noho ny fomba fijery tsy matoky ny ho avy reny (henony):
Navelako tamin’ny toerana nisy azy izy ary izaho kosa nanohy ny diako, mbola sahiran-tsaina noho ilay fomba fijery miiban’ilay tanora, ahoana no mbola hiainan’ny olona amin’ny fomba fijery maizina toy izany raha resaka hoavin’ny fireneny no foto-dresaka ? Ahoana no hifohàzana isan’andro miaraka amin’ny fankahalàna ny zavatra manodidina sy ny tontolo mitovy amin’i Bahrain toy izany ? Farafaharàtsiny raha miverina amin’ny tanoran’ny taona 90 mitovy taona aminy dia mety hitovitovy ny fankahalàna sy fahakiviana hifampizaràna, saingy nisy ihany izay azo nantenaina, nisy mpanavotra tsinjo. Olona iray mànana fomba fijery mazàva sy misy tanjona, fandahàrana asa manjavozavo nefa tena mbola tantara hafa ny amin’izany. Raha mbola misy ny toa an’Ingahy Hitchhiker (raiso hoe ‘ilay mpanao Auto-stop’ voalaza ery ambony) tsy afaka hanam-pinoana na amin’iza na amin’iza, na amin’inona na amin’inona. Very fanantenana tanteraka! Itariny fotsiny izao ny resaka hanondroana olona na zavatra iray ho fototry ny olana rehetra eran-tany. Ambarako hoe…hanondroana ny fianakavian’ny mpanjaka ho fototry ny sondro-bidim-piainana? Ary azo heverina ho isan’ireo nahita fianàrana tsara izy … tsara, araka ny fahitàna azy…Ny foto-pisainana toy izany no tena tany lonaka ho an’ny mahery fihetsika sy ny mpampihorohoro, saingy an’iza marina ny tsiny? Ilay zalahy ity dia nanakatra ambony tokoa tamin’ny fiheverana fa izay rehetra ilainy dia tokony ho azony avy amin’ny fitondrana (governemanta) avokoa, ho maimaim-poana ny fidirana an-tsekoly, ny fitsaboana sy hatramin’ny asa andavan’andron’ny isan-tokantrano aza ary ny maha ianao anao aza dia misy foana olona tokony ho tompon’andraikitra amin’izany raha ny heviny, toa voajanahàry tsotra izao raha miantehitra amin’ny mpitondra (governemanta) izy mba hanànana izay hisitrihana sy izay fidiram-bola sahàza, ahoana no hitarihànao azy handeha ho eny amin’ny Anjerimanontolo sy hifaninana amin’izany raha zavatra tsy mbola niainany mihitsy izany taloha? Na angamba ny mpitondra (governemanta) ihany no homena tsiny, tena mora tokoa ny miampanga ny ankavia sy ny ankavanana nefa leiretsy mba efa niady saina ve isika ny momba ity firenena ity!
Saron-doha: safidy sa an-tery?
Niady saina tokoa i Butterfly, saingy tamin-javatra hafa manokana. Ambarany amintsika ny tantàran’i Fatima:
كل الاطفال في نظري عصافير .. وفاطمة عصفورة لم تتجاوز التاسعة من العمر، زارتنا قبل ايام برفقة والديها وأخوتها وهي تجر خلفها غطاء طويل للرأس يكاد يصل الى أخمص قدميها .. ظننت انها تريد ان تسابق الزمن لتكبر فهكذا يفعل معظم الاطفال في عمرها .. ظننت ان والديها أجبراها على ارتدائه .. ظننت اشياء كثيرة ولكن لم يكن اي من ظنوني هو السبب لحجاب فاطمة المبكر.
عرفت ذلك من تعابير وجه فاطمة التي تغيرت في لحظة منذ ان بدأ الحديث يدور حول غطاء رأسها .. من احتقان عينيها بالدموع .. من اخفاءها لوجهها بوسادة المقعد الذي كانت تجلس عليه .. من تواريها بعد لحظات عن المكان. وتيقنت حينما سردت على والدتها قصتها مع المعلمة .. معلمة الفصل التي أستمرت طيلة العام الماضي في تأنيب فاطمة والسخرية منها على مرأى ومسمع جميع زميلاتها في الفصل لانها لا ترتدي الحجاب. ففاطمة حالة شبه شاذة في مدرستها التي يندر ان تجد فيها تلميذة لا ترتدي غطاء للرأس.
المربية الفاضلة، مربية الاجيال والتي يفصل بينها وبين فاطمة عشرات السنوات الضوئية لم تجد حرج في النزول بمستواها الفكري والعقلي لمستوى طفلة في الثامنة لتشن عليها نوع من الحرب النفسية، تارة بتبويخها وتلقينها دروس في مبادئ الاسلام والاخلاق الحميدة التي لم تتعلم هي أي شئ منها وتارة أخرى في مناصبتها العداء وانتهاز أي فرصة سانحة لاسقاط عقدها النفسية عليها لأنها لم تمتثل لأوامرها وترتدي الحجاب.
والنتيجة ان فاطمة بدأت ترزح تحت مجموعة من الضغوط النفسية، اضطهاد المعلمة لها من جهة وسخرية التلميذات منها من جهة أخرى…
كان ذلك في العام الماضي واليوم ترفض فاطمة الذهاب الى المدرسة دون غطاء الرأس بل انها قد تبكي لو ان أحدا منهم طلب منها ان تنزعه عنها. ليس ايمانا ولا حبا في ارتدائه ففاطمة ما زالت صغيرة جدا على استيعاب مثل هذه الأمور .. انها ترتديه خوفا من اساليب القمع التي تُمارس عليها في مدرسة حكومية في بلد ينادي بالديموقراطية، ووالديها التزما بالصمت لانهما لا يستطيعان نقلها الى مدرسة حكومية أخرى لأن القانون في البحرين يجبر التلميذ او الطالب على الالتحاق بمدرسة المنطقة التي يقطن فيها، ولا يستطيعان الحاقها بمدرسة خاصة لضيق ذات اليد، ولا يستطيعان الشكوى لوزارة التربية والتعليم خوفا من تعرض فاطمة للمزيد من المضايقات التي قد تؤثر سلبا على تحصيلها الدراسي.
حقيقة لم أكن أصدق ان قصص كهذه ما زالت موجودة في مدارسنا .. لست ضد الحجاب ولا المحجبات ولكني ضد القيم التي تُغرس قسرا ..
Mahazatra ahy ny mijery ny ankizy toy ny hoe voronkely.. ary Fatima dia voronkely iray tsy mbola feno sivy taona akory. Nitsidika anay izy, narahin’ireo raiamandreniny sy rahavaviny, andro vitsy lasa izay. Taoriany dia nitaritarika saron-doha lava be tonga hatrany amin’ny tongony izy. Noeritreretiko ho ‘nanao voalobo-jaza’ tamin’ny taona izy fa maika ny ho lehibe toy ny fanaon’ny ankizy hafa. Noheveriko koa fa noteren-draiamandreniny izy hitondra an’iny… Zava-maro no nosaintsainiko nefa ireny tsy nisy nahalàza ny antony nahatonga an’i Fatima hitondra saron-doha sahady toy izao. Ny tsapako dia niova ny volon’endrik’i Fatima vantany vao noresàhana ny momba ilay saron-doha nanaovany. Nanganohano ny masony ary nezàhany nosaronana tamin’ny ondan-tseza teo amin’ny nipetrahany ny tavany.. mandra-pahatongan’ny fotoana mety hialany eo amin’ny toerany. Taorian’io vao takatro izay niseho rehefa notantarain-dreniny ahy ny zava-nisy teo aminy sy ny mpampianatra azy. Dia ilay mpampianatra nandrabiraby azy nandritry ny taona noho ny tsy nitondràny saron-doha nanoloana ireo mpiara-mianatra aminy. Fatima dia tranga naningana tao amin’ny sekoly nisy azy, izay ny zazavavy rehetra ao dia saiky nisaron-doha avokoa. Io mpampianatra manankàja io, izay any amin’ny toerana tsy taka-maso amin’ny misy an’i Fatima no misy azy, dia tsy nihambahamba kely akory nanetry ny voninahiny hidina ambany sy handemy saina zazavavy kely vao valo taona monja. Nibedy azy ihany izy (reniny) tsindraindray, ary amin’ny fotoana sasany dia mandokandoka ny Islam, izay na izy aza dia tsy mahazo (nianatra) na inona na inona avy amin’izany. Araraotiny daholo izay fotoana rehetra azony araraotina mba hanilihana amin-janany ny complexes ananany, tsy nanaraka ny baikony nitondra ny saron-doha. Vokany dia nilefitra noho ny tsindry nahazo azy i Fatima – ny tsindry alok’ilay mpampianatra azy ankilany, ary ny fanadroadroan’ireo mpiray kilasy aminy etsy andaniny. Ny tamin’ny taona lasa izany fa ankehitriny tsy mety mankàny an-tsekoly tsy misaron-doha i Fatima ary manao an-dranomaso mihitsy raha misy mangàtaka aminy hanàla izany. Tsy hoe mitondra izany noho ny finoany izy na noho ny fitiavany saron-doha, izy rahateo tanora loatra raha momba izany resaka izany.. Entiny ilay izy noho ny tahotra ny famaizana satria sekolim-panjakàna no ianarany, anatin’ny tany milaza ho mampihatra ny demokrasia (fahalalàhana). Voatampim-bava ireo raiamandreniny satria tsy afaka hamindra azy amin’ny sekoly hafa, satria ny lalàna aty Bahrain dia manery ny hampidirana ny mpianatra amin’ny sekoly akaiky azy indrindra ary satria koa ho azy ireo dia tsy misy ny hoenti-mànana hampidirana azy amin’ny sekoly tsy miankina. Tsy afaka mametraka fitarainana any amin’ny Ministeran’ny fampianarana ihany koa izy ireo sao hahazo fandrahonana i Fatima, ka mety hitondra vokatra ratsy eo amin’ny fianarany izany. Raha ny marina no ambàra, tsy azoko sainina akory hoe mbola misy trangan-javatra toy izany any amin’ireny sekolinay ireny. Tsy manohitra ny saron-doha aho akory na ireo izay mitondra izany – nefa kosa tsy ekeko ny fametrahana soatoavina atao an-terisetra.
Voaendy hatramin’izany ve?
S toy ny hoe Saodia, vehivavy iray avy any Soeda nonina teto Bahrain, no sorena mahita ny fomba fitondra ny tanora:
“Soloy A’s Yaourt azafady, Al Marai Yaourt no tiany. Dia mba soloy sokola koa azafady iny mofomaminy iny ”
Izany no hafatra tao anatin’ny kitapon-janako vavy vao roa taona monja indray andro izay. Tsy haiko intsony izay tiako ho natao na hihomehy na hivàlan-drano. Fidio izy roa. Tamin’izany, fomba ahoana no hahazain-janako sahady manàvaka ireo vokatra ireo? Ary hatramin’ny oviana no lasa fomba mahazatra ny fihinànana mofomamy misy sokola isan’andro vaky? Tsy izany no fomba anabeazako ny zanako ary tsy ekeko velively ny fitakiana hampitondra mofomamy isan’andro. Sa izany no antsoin-dry zareo hoe tohan’aina? Jereo manodidina anao …feno zaza diso matavy loatra eny rehetra eny ary izany ve no fahazàrana nitondràna azy hatrany amin’ny faha roa taonany? Tena mankarary saina ny mieritreritra hoe ivon-toerana izay noraisina ho toeram-pibeazan’ny ankizy sy hampianatra azy no hihevitra fa ara-dalàna ny fihinànana zavatra tsy manjary toy izany isan’andro. Fotoana tsy ela talohan’io, naharay fampitam-bavovao avy amin’ny toeram-pianaran’ireo zanako lahy aho. Ankizy vitsivitsy tamin’ny kilasy fanombohana no nandeha nisinda. Nandeha nijery Mozea ary nianatra momba ny lova ananan’i Bahrain angamba izy ireo ? Tsia. Nandeha tany rehetra tany nijery ny fomba fanao ve ? Tsia. Nandeha tamin’ny toerana iray azo ametrahàm-panontaniana ve ? Tany amin’ny toeram-pamokarana Pizza iray ary nomem-boninahitra hitsidika ny lakozia sy hankafy ny pizzas izay naharendrika azy ny tsirairay…
Ambarao ‘zay resaka
Faranantsika miaraka amin’i Mohammad Al-Ubaydli, Bahraini iray monina any Washington izay manantena indrindra ny mba hanehoan’ny Arabo hevitra bebe kokoa:
Fony mbola mpianatry ny Anjerimanontolo tany amin’ny taona 1970 tany, Condoleezza Rice dia nanao zavatra tena ilaina ary nianatra niteny rosiana. Ankehitriny, ny zavatra tena ilaina dia ny mianatra teny arabo. Ao Washington DC, marobe ny olona manandrana mianatra io fiteny io. Amerikanina iray fantatro izany no nilaza fa henjana ihany ilay izy ary naleony nivadika nanao asa-na diplaomaty any Eropa. … Ary mbola maro dia maro ireo Amerikanina manatona ny The Washington DC Arabic Language & Culture Meetup Club mba hanatevina ny fifehezany ilay fiteny. Raha manontany azy ireo ny antony hianàrany aho, betsaka ihany ny somary sahirana mitady valinteny. Vitsivitsy amin’izy ireny, ahiahiako, no miezaka manafina amin’ny Arabo hoe maniry ho lasa mpitsikilon’ny governemanta Amerikanina.. Nefa ny Amerikanina manokana, indrindra fa ny avy any atsinanana, dia mila mianatra hoe ahoana no fomba fifandraisana amin’ny Arabo. Misy làlana iray izany eto ho an’ny Arabo … Saingy io làlana ho an’ny Arabo io dia hafa lavitra noho ny resaka ara-barotra ; azontsika atao ny manampy ny Amerikanina hahatsapa ny fomba fijerintsika Arabo, sy ny hoe nahoana isika no mifikitra amin’izany, toy izay hoe hanenina noho ireo tsy fitoviam-pijery maro ka hitolona anaty adintsaina. Ohatra iray mafonja ny nataon’ny Wikipedia, encyclopédie iray malàlaka manampy ny tsirairay hanatevin-dahàrana sehatr'asa iray efa misy. … Misy koa, mazava ho azy, tranonkala iray…soratana Arabo amin’ny teny Arabo ho an’ny Arabo ary manindry manokana ny momba ny resaka teknolojia, maneho ny zava-kinendrin’ireo mpanoratra mavitrika ao aminy. Saingy mbola betsaka isika no tokony hanoratra bebe kokoa. . Satria raha zava-dehibe ho an-dramatoakely Rice ny mianatra miresaka amin’ny Rosiana, isika koa tokony hahatsapa fa zavatra tena ilaina ny mianatra miresaka amin’ny Amerikanina
Tantaran'ny Fanabeazana farany
5 andro izayAzia Atsimo
2 herinandro izayAzia Atsimo
2 herinandro izayKaraiba
‘Mihoatra noho ny azo ihafiana ianareo’